Izindaba ezintsha ezivusa inkanuko
I-Erotica isiqalile ukuba yizincwadi ezijwayelekile. Kuyatholakala kuzingxenyekazi eziningana, kufaka phakathi izincwadi ezinjenge-Fifty Shades Of Grey! Noma kunamasayithi amaningi we-xxxstories, akuwona wonke ahlinzeka ngekhwalithi efanayo yokuxoxa izindaba nohlu lwezigaba esingazenza. Kusukela kuzindaba ezishisayo zomfazi ocansini kuya kuzindaba ezishisayo zobulili besifazane, sinakho konke okuthandayo. Uma ufuna okuthile okuhlukile, amathuba ukuthi uzokuthola lapha, noma ungazama ukuzibhalela wena!
Izindaba zabantu abadala
Izindaba zocansi ezishisayo. I-Erotica akudingeki ukuthi njalo ibe yinoveli. Kunamakhulu ezindaba ezimfishane ezivusa inkanuko zokufanisa imicabango yakho kusayithi lethu!
Izindaba ezingcolile. Ucabanga ukuthi unamaphupho angcolile? Singcolile kakhulu. Bheka ezinye izindaba zocansi ezishisayo ezingcolile manje!
Izindaba zocansi ezishisayo zindala. Uma ubheka lapha, khona-ke sinezikhulu zezindaba ezivuthiwe ongakhetha kuzo.
Xoxa nabalobi. Uma inganekwane ingakwenzeli yona, ungahlala uxoxa ngevidiyo namantombazane ashisayo abhala izindaba zocansi ezishisayo zangempela kusayithi lethu. Kunabantu bangempela abalandela i-erotica esizeni sethu, futhi amathuba okufundayo enzekile empilweni yangempela. Ungakhuluma ngisho nochwepheshe ukuze uthole ukuqonda okuphelele futhi kumnandi ngokwengeziwe!
Thola okubhaliselwe ukuze ufunde izindaba ezishisayo ezivuthiwe. Sinikeza ngezindaba ezahlukahlukene zamahhala zezindaba zocansi. Uzothola zonke izigaba nesitayela sokubhala ongazicabanga. Uma ufuna okuthile okungaphezulu, okuthile okungcolile, futhi okushisayo, khona-ke uzodinga ukubhalisa. Noma kungukubhaliswa kwamahhala, ukubhalisela kukuvumela ukuthi ufinyelele ezishisayo, nazo zonke izinganekwane zibekwa ngamagama.
Abalobi bamathiphu futhi ubakhuthaze ukuthi babhale izindaba ezinhle kakhulu
Uyawuthanda umsebenzi wombhali othile? Ufuna ukuthi baqhubeke nokuthumela okuningi noma ubazise nje ukuthi uwazisa kangakanani umsebenzi wabo? Ungahlala ubathumela umlayezo wangasese ukuze ubazise! Ngokwengeziwe, ungashiya ithiphu noma isipho ukuze ubakhombise ukuthi uwuthande kangakanani umsebenzi wabo. Kuzoba yisikhuthazo kubo ukubhala izindaba ezinhle kakhulu ezithandekayo!
Imigomo Yokusebenzisa Inqubomgomo yobumfihlo Ukusekela